Outplay: Sehatra famokarana varotra ivelany feno Omni-Channel | Martech Zone
Amin'ny maha orinasa kely ahy dia sahirana tamin'ny varotra foana aho. Tsy ny varotra tetika izany no olana, ny loharanom-pahalalana nilaina hanohizan'ny fanampiana ireo vinavina hahatratra ny tsipika fahatongavana. Izy io dia tena antony lehibe iray nanombohako ny Mpiara-miasa Salesforce orinasa, Highbridge. Fantatr'ireo mpiara-miasa amiko tokoa fa ny fananana dingana sy loharanon-karena hamindra ny dian'ny varotra dia fototry ny orinasa mitombo. Raha mbola irery aho dia hahita fahombiazana… nefa tsy hitombo.
Ny fanamby manaraka dia ny lahasa asa maro takiana mba hanampiana ny mpanjifa. Tena gaga aho amin'ny fanarahan'ny VP ny fampandrosoana ny raharaham-barotra sy fikasihana mpiara-miombon'antoka, masoivoho ary fanantenana am-polony isan-kerinandro. Ny atidohako dia tsy afaka mahavita an'io. Miantso azy matetika aho 15 minitra alohan'ny fivoriana iray mangataka aminy hampahatsiahy ahy ahy hoe iza ilay prospect ary nahoana isika no miresaka amin'izy ireo!
Ny fifampiraharahana amin'ny varotra dia zava-dehibe amin'ny fizotry ny varotra. Ny fijerena ny filan'ny prospect ary ny fanampiana azy ireo handray ny dingana manaraka dia manafaingana ny dia ary ny fifampiraharahana dia mampiorina ny fahatokisan-tena amin'ny vinavinanao fa mpiara-miasa azo antoka ianao.
Paikady fivarotana ivelany
Alohan'ny hitadiavako fitaovana mandeha ho azy amin'ny varotra, dia tena mamporisika anao aho handinika indray ny fomba fampiasana ny iray amin'ireo sehatra ireo, na izany aza. Tototry ny mailaka amin'ny alàlan'ny mailaka miaraka amin'ireo fitaovana izay manohy ny fanakorontanana, ny fanakorontanana ahy amin'ny hafatra manontany raha nahazo ny hafatra farany aho. Fantatro fa fitaovana fanaovana an'io ity ary mahatezitra. Raha tokony hamaly dia esoriko na alaintsika ho toy ny fako ireo mailaka ireo. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia afaka manimba zavatra betsaka kokoa ianao amin'ny sehatra fifanakalozana varotra noho izay azonao atao tsara - raha tsy ampiasanao araka izay tratry ny ananany izy ireo.
Rehefa mampivelatra ny mandeha ho azy ianao dia tena tiako ny mampiasa ny touchpoint rehetra hanampiana ny lanjan'ilay resaka. Ka raha tokony ho hafatra mandeha ho azy izay manontany raha nahazo ny hafatrao farany aho… fa kosa mailaka milaza hoe, mety ho tsara kokoa ny zavatra toy izao:
Tsy nahazo valiny tamin'ny hafatra farany aho ary manantena ny tsy hanelingelina anao. Raha tsy liana amin'ny [vokatra, serivisy sns] izahay, azafady aza misalasala manatona ary ampahafantaro ahy. Mandritra izany fotoana izany, manana trano famakiam-boky loharanon-karena lehibe izahay hanampy anao hikaroka raha hanome lanja na tsia izahay.
* Mampiasà tranga avy amin'ny indostria toa anao. [Rohy]
* Ebook nosoratanay momba ny lohahevitra. [Rohy]
* Ny gazetinay isan-kerinandro izay manome topy maso ny lahatsoratra farany nataonay. [Rohy]
Te hiresaka amin'ny alàlan'ny fivoriana aho - azonao atao ny mametraka ny fotoana voatondroo eto. [rohy]
Nanao zavatra vitsivitsy aho tamin'ity ohatra kely ity izay manakiana:
Nomeko alalana ny prospect hampahafantatra ahy fa tsy liana izy ireo. Ny olona tena tsy te-hiteny amin'ny hafa mba tsy hivarotra intsony… noho izany ny fanomezan-dàlana ny fahazoanao manararaotra milaza fa tsia dia tena ilaina. Avelao ianao hitsahatra amin'ny fametahana azy ireo ary manome azy ireo ny fanajana fa tsy hoe hanelingelina azy ireo fotsiny ianao.
Nomeko ny mombamomba ny loharanom-baovao voavao izay afaka manampy azy ireo handroaka ny dian'ny mpanjifa.
Nataoko manokana ny loharanom-pahalalana ho an'ny indostrian'izy ireo ary nomeko azy ireo ny fampahalalana fohy sy lava mba hahafahan'izy ireo mandevona ny habetsaky ny fampahalalana nofidiny.
Nomeko fomba iray hananganana fivoriana izy ireo nefa tsy hamaly ny mailaka, izay afaka mivoaka azy ireo avy ao amin'ny boky filalaovana ary mankamin'ny dingana manaraka mankany amin'ny dia mivarotra.
Outplay dia namoaka ebook iray izay mampiditra ny paikadin'ny playbook sales an'ny orinasa 30 mahery:
Fehezan-dalàna momba ny varotra ambony indrindra
Momba ny Outplay
Outplay dia sehatra fifampiraharahana amin'ny fantsona marobe izay manana ny zavatra rehetra ilainao eo ambanin'ny sehatra iray hanampiana anao hampitombo ny fahafahanao mandanjalanja bebe kokoa amin'ny tsirairay amin'ireo mpivarotra anao. Mampiasa dialer mba hisamborana hetsika hiantsoana sy handefasana ny antso manarakao, mailaka hanarahana avy hatrany ny fangatahana izay mbola tsy voavaly, hiresaka hifaneraserana amin'ireo mpitsidika tranokala, motera famandrihana fihaonambe ho an'ny fivoriana, ary fanadihadiana feno handrefesana sy hanatsara ny varotrao workflow dia misy amin'ny sehatra iray daholo.
Ny endri-tsarimihetsika ivelany dia misy:
Analytics - Mijanona eo alohan'ny lalao miaraka amin'ny an-tsipiriany isaky ny famakafakana analytics amin'ny ambaratonga tsirairay sy ekipa.
automatique - Ataovy mandeha ho azy ny fizotran'ny varotrao, mitsitsia fotoana ary aza hadino ny fifanarahana.
Chat - Ny Chat dia ao anatin'ny fanaontsika andavanandro sy ny fantsom-pifandraisana haingana kokoa ho an'ny rehetra. Ankehitriny, mifanakaloza hevitra amin'ireo manantena anao rehefa mitsidika ny tranokalanao sy mivory fivoriana avy hatrany izy ireo.
Dialer - Fiantsoana erak'izao tontolo izao sy endri-tsoratra amina tonika hafa hanakatonana fifampiraharahana haingana kokoa. Ampidiro ao anaty CRM anao ny naoty antso.
Fanarahana ny mailaka - Ny fanaraha-maso ny mailaka tsara indrindra amin'ny indostria, ny fanarahan-dia ny fanindriana ny rohy, ary ny fahitana ny valiny hahafahanao mahatratra ny tanjonao amin'ny fahatokisana.
Integrations - Fampidirina miaraka amin'ny Salesforce, Crelate, Zapiet, Gmail, ary Pipedrive.
Fivoriana-Booker - Mizarà ny kalandrie ataonao ao anaty mailaka sy fivorian'ny boky miaraka amin'ny vinavinanao, tsy misy mailaka miverina. Eto ny fampahatsiahivana hanampy anao hampihena ny tsy fampisehoana.
Multichannel - Ampiasao ny vinavinanao na aiza na aiza misy azy ireo ary atombohy haingana ny fifanakalozan-kevitra amin'ny paikadim-pifandraisana multichannel.
Fitaovana famokarana - Fanitarana Chrome izay mametraka ny mailakao amin'ny steroid miaraka amina endri-javatra toy ny fanarahan-dia misokatra, ny fanarahan-dia ny rohy, handefasana aoriana, fampahatsiahivana, fivoriana, modely ary filaharana.
Fanatanterahana asa - Natao hamonoana laharam-pahamehana amin'ny hafainganam-pandehan'ny hazavana amin'ny haben'ny 2hrs / andro ora an'ny reps. Fantaro izay asa tokony hatao, oviana ary hihazakazahana rehetra nefa tsy mila mizaha ny pejy.
Fanarahan-tranonkala - Ny fitsidihana ny fampandrenesana sy ny fitondran-tena momba ny fizahana amin'ny tranokalanao dia manampy anao hamaky ny sain'izy ireo ary hanavakavaka ny resaka hiavaka sy hiova haingana kokoa.
Outplay dia manana Fitsarana Maimaimpoana Mandritra ny 14 Andro izay azonao atao ny misoratra anarana hijerena ny sehatra misy azy ireo:
Tags: dialerfampidirana gsuiteny fomba fanoratana mailaka ivelany varotrampamandrika fivorianafivoriana an-tseraseradialer ivelanymailaka fivarotana ivelanyTorohevitra mailaka amin'ny varotra ivelanyfifampiraharahana amin'ny varotra ivelanytoro-hevitra ivelanyoutplayFanamafisana ny varotravarotra mandeha ho azy automatiqueresaka amin'ny tranonkala